Global Voices teny Malagasy » Tonizia: Niverina ny Ammar 404 ary nanivana bilaogy indray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Febroary 2019 4:12 GMT 1	 · Mpanoratra Lina Ben Mhenni Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Taorian'ny fiatoana fohy, dia nanafika indray ny tontolon'ny bilaogy Toniziana ny Ammar 404 . Ammar no anaram-bositra nomen'ny bilaogera toniziana ho an'ny milina mpanivana manembatsembana ny fidiran'izy ireo amin'ny aterineto ary ny bilaogin'i 3amrouch, Zig Zag  no lasibatra tamin'ity indray mitoraka ity. Toa voasivana ny bilaogy noho ny famoahana pikantsary tamin'ny gazety Kanadiana  izay nampiseho ny famarotana Villa iray novidian'ny vinantolahin'ny filoha Toniziana Mohamed Sakhr El Matri iray tany Kanada tamin'ny vola be tsy toko tsy forohana – vaovao izay tian'ny governemanta Toniziana hafenina amin'ny vahoaka. Bilaogera maro no nanoratra momba ity sivana ity ary nanameloka izany.
Samsoum  nanoratra hoe:
Voasivana ny bilaogin'i 3amrouch noho ny famoahana indray ny vaovao avy amina gazety Kanadiana izay azon'ny rehetra jerena. Ho firaisankina, dia namoaka rohy misy ity gazety ity ihany koa aho izay mampiseho ny pejy faha-10 mikasika ny fividianana trano tian'ny governemanta afenina fatratra. Avelao izy ireo hanivana ity blaogy ity koa !!!
Thoughts of an ex-Muslim  nanoratra hoe:
Raha mbola tsy niantso ho amin'ny fankahalàna, herisetra, na fampihorohoroana izy, dia tsy ekena ny sivana tsy misy fanapahan-kevitra ara-pitsarana mazava, malalaka sy ara-drariny. Tsy ekena ny sivana noho ny fitsikerana ny lafiny kolikoly. Ny olona adala izay nandray ny fanapahan-kevitra hanivana mba hampifaliana an'i Sidi Bouhjar (anarana nomena an'i Sakhr El Materi), dia nampiasa an'i 3amrouch mba hanimba ny tompony kely.
Ordinary stories  nibilaogy hoe:
Nosivanina ny blaogin'i 3amrouch satria niresaka lohahevitra izay tsy mahafaly ireo tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fiarovana. Na dia teo aza ny fanamelohanay ireo fomba fanao ireo, tsy takatr'i Ammar izany. Tsy mahatakatra izy ary tsy ho takany mihitsy. Izany no antony hamoahako indray ilay lohahevitra izay mety ho anton'ny sivana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/22/135006/
 gazety Kanadiana: http://scoubidou1.blogspot.com/2009/05/httpwww.html